Ogaden News Agency (ONA) – Cali- fancad iyo Ceel- xaar oo si fiican loogu naafeeyay maleeshiyada Wayaanaha
Posted by ONA Admin	/ October 30, 2011
Warar goor dhaweyd naga soo gaadhay X/dhexe ee JWXO ayaa waxay sheegayaan in shalay oo ay taariikhdu ahayad 29/10/2011 dagaal gacmaha la isula tagay uu ka dhacay deegaanka Cali fancad oo ka tirdsan degmada Sagag ee gobolka Nogbeed.
Dagaalkan oo ahaa weerar si fiican loo qorsheeyay ayaa lagu qaaday kulanyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada cadawga. Gaadiidkan oo aad u tiro badnaa ayaa bilawgiiba waxay CWXO dabka saareen oo ay dhulka la simeen gaadhiigii ugu horeeyay, sidoo kalena waxay dhaawac hawlgab ah gaadhsiiiyeen laba baabuur oo kale.
Wariyaha ONA ee goobaha dagaalka wuxuu noo xaqiiyay in maleeshiyadii cadawga halkaa lagaga dilay 45 askari oo darajooyin kala duwan lahaa, halka uu dhaawacuna kor u dhaafay 60 askari.
Wuxuu wariyuhu intaa ku darayaa in ciidamada cadawga lagaga furtay goobta hubka noocyadiisaa kala duwan oo ay ka mid yihiin boobayaasha culus, qoryaha AK47 isgaadhsiin kala duwan, saanada iyo qalab kale.
Dagaalkan oo mudo socday oo markii dambe ay labada qolaba soo gaadheen gurmadyo ayaa gabagabadii ciidamadii cadawga ay ka carareen goobtii halkaasoo uu CWXO u hadhay.
Dhanka kale waxaa jira dagaal kkadhaadh oo ay CWXO kula galeen maleeshiya itoobiya meesha lagu magacaabo Ceel Xaar oo ka tirsan degmada Baabili bishan 27/10/2011. Dagaalkan oo ahaa mid ay Ciidamada Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya ku weerareen ciidan uu lahaa cadawga oo halkaa u joogay hawlgal ayaa waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay in ka badan 12 askari iyadoo lagaga dhaawacay in ka badan 17 askari oo kale. Waxaana ciidamada cadawga lagaga furtay noocdayada qalabka ciidamada oo tiro badan.
Dad goobjoog ahaa oo arkayay markii la daabulayay dhaawaca cadawga ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 5 baabuur oo lagu daabulayay dhaawaca cadawga waxayna qiyaasayaan in dhaawaca cadawgu uu gaadhayay tobanaan.
Wararku waxay intaa ku darayaa in 29/10/2011 habeenimadii lagu dilay gudaha saldhig ciidanka cadawgu uu ku leeyahay Horahawd oo ak tirsan degmada Qabri bayax 1 askari.
26/10/2011 Maleeshiyada cadawga ayaa hawlgal u tagay fiidoole oo ka tirsan degmada Dhuxun waxayna halkaa ku qab qabteen dad tiro badan oo deegaankaas joogay. CWXO oo ka warhelay dhacadadan ayaa weerar ku soo qaaday maleeshiyadii cadawga waxayna ku guulaysteen inay farahooda ka bixiyaan dhamaan maxaabiistii oo badqaba.
Weerarkan oo ahaa mid la isku noqnoqday ayaa ilaa hada aan si cad loo ogaanin khaasaraha dhabta ah ee cadawga la gaadhsiiyay inkastoo warar laga helayo dhinaca dadka shacabka ay sheegayaan inay jiraan dhimasho badan iyo dhaawacba oo soo gaadhay maleesiyada cadawga.